Qubanaha » 9 Askari oo ku geeriyootay qarax ciidamada Kenya lala eegtay.
9 Askari oo ku geeriyootay qarax ciidamada Kenya lala eegtay.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ah ee ka dhashay qarax ciidamada Amisom lagula eegtay duleedka deegaanka Husingow ee Gobolka Jubbada hoose.
Qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso, ayaa lala eegtay ciidamada xilli ay sii galayeen Hosingow, waxaana ka dhashay sida wararka ay sheegayaan Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidanka Kenya iyo kuwa Somalida ah.
Sarkaal ka tirsan ciidamada Somalida ee ku sugan deegaanka Hosingow, ayaa xaqiijiyay Sagaal askari inay ku dhinteen qaraxaasi oo Afar ka mid ah yihiin Somali, halka shanta kalena ay yihiin ciidan Kenyan ah.
Wuxuu sheegay qaraxa miinada ah inuu qabsaday gaari ay saarnaayeen ciidan Somali ah iyo ciidan Kenyan ah, halkaasi ciidanka ay ku noqdeen, kuwa dhinta iyo kuwa dhaawacma sida uu sheegay Sarkaalkaasi.
“Walaal waxa ay aheyd ciidan shaqo ku jira, ayaa gaarigii ugu horeeyay waxaa la kacay miino oo qolyahan Burcad diimeedka ay geliyeen, niyow 9 ayaa dhimatay Shan waa Amisom, afarna waa Somali, waa miino kaliya dagaal ma dhicin gaarigii ugu horeeyay ayeey miinadaasi la kacday.” Ayuu yiri Sarkaalkaasi.
Al Shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda qaraxaasi, waxayna sheegeen ciidamada Kenya oo sahay sida inay la beegsadeen qaraxaasi oo ay fuliyeen guutada qaraxyada ee Shabaab sida ay sheegteen.
Xoogaga Shabaab ayaa inta badan waxyaabaha qarxa ku aasa duleedyada Magaalooyinka ay joogaan ciidamada Amisom iyo wadooyinka ay maraan ciidamadaasi.